CUT University Making Masks
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCoronavirus hwakaburitswa nehurumende neMuvhuro, hwasvika pavanhu vasere, uye munhu ashaya nechirwere ichi achiri munhu mumwe chete.
Huwandu uhu hunogona kukwira chero nguva apo hurumende ichazivisa zvinenge zvaitika.
Pavanhu vasere vakabatwa nechirwere cheCoronavirus, vana vanobva kudunhu reMashonaland East, vatatu kuHarare uye mumwe chete kuVictoria Falls.
Mukuru mubazi rezvehutano mudunhu reMashonaland West, Dr Wensilus Nyamayaro, vanoti zvave kuziviswa manheru ega ega kana pane zvinenge zvashanduka pahuwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCoronavirus.
Zimbabwe yakatara mazuva makumi maviri nerimwe ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, icho chabata vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mana muZimbabwe, uye vanhu vanosvika mazana masere ezviuru pasi rose.
Senzira yekubatsira varwere munyika iyo yakatarisana nekushaikwa kwema ventilators anobatsira kufema vanenge varwarisa zvakanyanya nechirwere ichi, zvimwe zvikoro zvepamusoro zvinoti zviri kushandisa hunyanzvi hwazvo kugadzira ma ventilators, ma sanitisers nemasiki.
Chikono chepamusoro cheHarare Institute of Technology chinoti chiri pakati pekugadzira muchina wekufambisa mhepo mudzimba dzinochengeterwa vanhu vanenge vachirwara nechirwere cheCOVID-19.
Ukuwo Chinhoyi University of Technology, CUT, inotiwo iri pakati pekugadzira mamasiki apo kune rumwe rutivi iri kutsvaka zvikwanisiro zvekugadzira ma sanitisers sezvo chikoro ichi chine hunyanzvi hwacho.
Vachitaura nevatori venhau muChinhoyi, mutauriri weCUT, VaMusekiwa Tapera, vati vari kugadzira mamasiki senzira yakaonekwa nechikoro ichi yekurwisa chirwere cheCoronavirus.
VaTapera vati vamwe vana muzvinafundo vari mubishi kuita hurongwa hwekugadzira ma sanitisers.
Asi mukuru weCUT, Muzvinafundo Jambwa Simbi, vati basa rekugadzira mamasiki riri kudzoserwa kumashure nekushaikwa kwemagetsi nguva dzakawanda.
Zvikoro izvi zviri kutora matanho aya sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzehutano panguva iyo hurumende iri kutatarika kuwanira vashandi vemuzvipatara zvipfeko zvekuzvidzivirira zvakakwana pavanenge vachirapa varwere vanofungidzirwa kuti vane Coronavirus.
Zimbabwe yapinda muzuva repiri vanhu vachigara kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kweCoronavirus, iyo yakatanga kuChina gore rapera, uye kusvika pari zvino, yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezvisere pasi rose, kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe, uyo akashaya svondo rapera.